Hunters Roots Kafe - Imewe Mmewe
Fraịdee 23 Eprel 2021
Kafe Izizi na nkenke maka ụdị ọgbara ọhụrụ, dị ọcha, n'ime ime mmụọ nke igbe osisi eji mee n'ụdị adịghị adị. Okwute na-emejupụta oghere, na -emepụta ụdị ihe ọkpụkpụ dị ka nnukwu ihe ọkpụkpụ dị ka ọgba, ma nke a na-esite n'ụdị geometric dị mfe ma kwụ ọtọ. Ihe si na ya pụta bu ahụmịhe gbasara ohere dị ọcha ma na - achịkwa. Thekpụrụ nkọ na-ebukwa ohere dị mkpirikpi site na ịmegharị ihe ndozi ka ọ bụrụ atụmatụ mma. Ọkụ, kọbọd na ndozi na-enye aka n’ichepụta echiche na ihe ọkpụkpụ.
Aha oru ngo : Hunters Roots, Aha ndị na-emepụta ya : Kei Kitayama, Aha onye ahịa : Hunters' Roots.
Wenezdee 21 Eprel 2021
Oghere dị n’ime na imebe ihe ngosi
Eye of Ra' Arịa Ụlọ Ọha Na Eze Tiuzdee 11 Mee
NISSAN Calendar 2013 Kalenda Mọnde 10 Mee
GlassOn "lọ Mbọsị Ụka 9 Mee
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Tiuzdee 11 Mee
Chepụta akụkọ mgbe ochie Mọnde 10 Mee
Nhazi nke ubochi Mbọsị Ụka 9 Mee
Onye rụrụ ụbọchị Satọdee 8 Mee
Otu mmebe nke ụbọchị Fraịdee 7 Mee
Kafe Kei Kitayama Hunters Roots